Ziziphi izixhobo ezilungileyo ze-Amazon xa kuziwa ekulungiseni uluhlu nokuphathwa kwexabiso?
Kuza ngaphandle kokuthi ukuzenzekelayo kuyisitshixo ekuphumeleleni komthengisi ngamnye ophumeleleyo kungekhona kuphela kwi-Amazon, kodwa eyona nto yokukhula ngokubanzi kweshishini lonke le-ecommerce okanye nayiphina iprojekti yokuthutha. Ngoko, ngaphantsi ndiza kukubonisa ezinye zezona zixhobo ezilungileyo ze-Amazon ukukunceda ngokulawulwa kwexabiso kunye nokwenza ulungiso lwendlela yokuhlala ukhuphiswano olubukhali lweemarike kwaye ukhokele phambili kumncintiswano wakho osondeleyo.
Kukho uludwe olufutshane lwezikhokelo ze-intanethi ezisetyenziswayo kwaye mhlawumbi zixhobo ezifanelekileyo ze-Amazon ukhuthazwa ukuba uzame kuqala:
( 9) I-Repricer Express - iphakathi kwezona zixhobo ezilungileyo ze-Amazon xa kuziwa ekuphumeleleni izinto ezininzi zokuthenga ii-Boxes ngaphandle kwemisebenzi emininzi yokusebenza. Ngokucacileyo, olu khetho lunokudibanisa isisombululo esincinci seendlela zokwenza izinto ngokwasemgangathweni ngokwawo, kunye nokuthengisa kunye nokuphathwa kwempahla kunye. Zive ukhululekile ukusetha ixabiso lakho lemveliso ngokubhekisele kwesinye sezicwangciso ezilandelayo, njengokubetha amaxabiso omncintiswano ngamanani athile, ukuhlaziya amanani akho aphezulu / aphantsi kunezinye indawo emakethi, okanye ukungahoywa ukhuphiswano linikela ngesizathu esithile.
Amazwi omthengisi - ayaziwa njengenye yezona zinto zixhobo ezilungileyo ze-Amazon ezifunekayo ukwenzela ukwenziwa kohlengahlengiso lwemveliso. Amazwi omthengisi anceda kakhulu ngegama lakhe eliphambili leengcebiso eziqokelelwe kungekhona kuphela kwi-Amazon, kodwa zihlangene nakwezinye iiplani eziqhagamshelanisiweyo ze-ecommerce ezifana neWalmart, Jet, njl. Kwenzeke nje, kunye namazwi eMarchant ungagqiba ukulungelelanisa kakuhle nokuphathwa kwazo zonke icandelo lezihlomelo zakho zemveliso - ezivela kwizihloko zeemveliso kunye nenkcazo, kwiibhola zebhola kunye nayiphi na enye idatha ehambelana nomkhiqizo-ngokusekelwe kwiziphumo ezichanekileyo ezisetyenziswa ngabadayisi abaphezulu kwi-niche yakho.
Intengiso ye-Engine Plus - imele yonke isethi edibanisa iimpawu eziphezulu eziphathekayo zezona zixhobo eziphathekayo ze-Amazon. Esi sikhokelo esinokusiza sinokunceda bonke abathengisi bakhule ibhizinisi lokuthumela i-drop down kwi-Amazon ngale mimandla elandelayo: inkalo yokungena kunye nokulula kwemveliso, uludwe oluphambili kunye nolawulo lwe-FBA lokuthunyelwa, isilathisi esilulayo kwaye esilula ngokuzenzekelayo, i-dashbhore efundisayo kunye nefanelekileyo. khetha uluhlu, ukushicilelwa kwee-labels, kunye nezinye izinto ezinokubaluleka kwezihlomelo kunye nokuthunyelwa kwempahla.
Umhlambululi womlambo - uyaziwa njengesixhobo esikhulu sokwenza uluhlu lwemveliso ngokucwangciswa ngokukhawuleza. Ucoceko lweMlambo asikho isixhobo esicacileyo okanye isakhelo sekhompyutheni, isandiso esiphezulu nesifumaneka kalula kwisiphequluli se-Chrome ukuba sichaze ngakumbi. Iimpawu eziphambili zeli khetho ziquka iziphakamiso zegama eliphambili le-keyword ezibanjwe ngokukhawuleza ukusuka kumncintiswano wakho ophumeleleyo ngaphaya kwelo, inkqubo yokukhangela inkcazo yokukhenketha komkhiqizo, isisombululo sokulungisa ngokukhawuleza kwegama elipiniweyo kunye nemigca yokukhangela imilenze ende, icebo elikhawulezayo lokufumanisa phezulu / ngaphantsi ukusebenza kwiphankaso yePPC, udidi olufanelekileyo kunye nenkqubo yokulungiswa kwenani lamanani kuzo zonke iindidi zeemveliso, kunye nokukhangela kwe-smart order ngegama lomthengisi, izilumkiso zeselula, ukubeka uluhlu lokujonga kuqala kunye nezinye iindlela ezininzi zokuzenzekelayo ukulungiselela uluhlu lwe-Amazon ku thengisa.